उनले हरियाणा विधानसभा चुनावमा आदमपुर सीटबाट कांग्रेस कुलदीप विश्नोईविरुद्ध चुनाव लडेकी थिइन् । यद्यपि, चुनावी मैदानमा उनी विश्नोईसँग पराजित भइन् ।
भिडियोमा सोनालीको पिटाई खाने व्यक्ति हिसार मार्केट कमिटीका सचिव हुन् । सोनाली किसानका केही समस्या लिएर उनलाई भेट्न गएकी थिइन् । कुराकानीको क्रममा सोनाली र ती व्यक्तिबीच बहस भयो त्यसपछि उनले चप्पलले कुट्न थालिन् ।
सोनाली फोगाट विधानसभा चुनावताका पनि चर्चामा आएकी थिइन् । त्यस समयमा पनि उनी थुप्रै विषयमा विवादित बनेकी थिइन् । ती व्यक्तिले आफूले अह्राएजति सबै काम गरिरहेको भनेर सोनालीलाई बताएको पनि भिडियोमा सुन्न सकिन्छ । आफूमाथि दुर्व्यवहारपूर्ण तरिकाले बोलेको भन्दै सोनालीले रिस पोखेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
यसैबीच, त्यहाँ एक प्रहरी अधिकारी पनि उभिएको देख्न सकिन्छ जसले सोनालीलाई एकपटक पनि रोक्ने कोसिस गरेका छैनन् । भारतीय सञ्चारमाध्यम हिस्दुस्तान टाइम्सले युट्युबमा उक्त भिडियो अपलोड गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले भिडियो ट्विट गर्दै मनोहर लाल खट्टर सरकारमाथि आरोप लगाएका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘के हरियाणाका कर्मचारी बिजेपी नेतामार्फत् अपमानित हुन र थप्पड–चप्पल खानका लागि हुन् ? के हरियाणाका कर्मचारी भाजपाका नोकर हुन् ? के कर्मचारी जनावर हुन् ? कारवाही कहिले गर्नेछौ ?’ एजेन्सी